Ray Tracing ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ မည်သည့်ဗီဒီယိုကဒ်များကိုရရှိနိုင်သနည်း။ ulator Emulator.online ▷🥇
ဗီဒီယိုဂိမ်းအသစ်များ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်သည့်အခါဂရပ်ဖစ်ရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သော Ray tracing ဟူသောဝေါဟာရကိုမကြာခဏတွေ့ရတတ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်၎င်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုတိကျစွာသိရှိပြီး၊ မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဂရပ်ဖစ်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်ဤမျှအရေးကြီးရသနည်း။ ။ နှောင်းပိုင်းတွင်နောက်ဆုံးနေ့ပေမယ့် Ray tracing သည်ရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲရှုပ်ထွေးသောနည်းပညာဖြစ်သည် သို့သော်ရိုးရှင်းသောစကားလုံးများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုရိုးရှင်းပြီးနားလည်ရလွယ်ကူသည့်စကားလုံးများဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ သို့မှသာမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုလာမည့်မျိုးဆက်ဂိမ်းများတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးလာသည်ကိုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာမင်းကိုပြမယ် ray tracing ဆိုတာဘာလဲ။ အဲဒါကိုထောက်ပံ့တဲ့ဗီဒီယိုကတ်တွေကိုလည်းပြပေးမယ်, ဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ချက်ချင်းပင်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအသက်သွင်းနိုင်စေရန် (များသောအားဖြင့်သုံးသပ်ချက်များတွင်သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ထားသောထုတ်ကုန်၏ preview tab တွင်ထင်ရှားစွာဖော်ပြထားသည်) ဂိမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည်။
Ray tracing လမ်းညွှန်
Ray tracing ကိုရှင်းပြရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုသည်မည်သည့်အားသာချက်များနှင့် ၄ င်းကိုထောက်ပံ့သောဂိမ်းများ (ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောဂရပ်ဖစ်ကတ်၏အသားတင်) တွင်အမြဲတမ်းတက်ကြွစွာထားသင့်သည်ကိုနားလည်ရန်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးကိုလုံးဝစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။ ကျွန်တော်တို့မှာသဟဇာတရှိတဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်မရှိရင် PC ဂိမ်းတွေမှာ Ray Tracing ရဖို့ဘယ်မော်ဒယ်ကို ၀ ယ်မလဲဆိုတာကိုလည်းပြပေးပါလိမ့်မယ်။
Ray Tracing ဆိုတာဘာလဲ။
Ray tracing သည်မျက်နှာပြင်များနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည့်၎င်း၏ရောင်ခြည်များကို လိုက်၍ အလင်းသွားစေသောလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် optical geometry တွင်အလုပ်လုပ်သောနည်းပညာဖြစ်သည်။ အစစ်အမှန်အလင်းသည်မျက်နှာပြင်များအားလုံးမှရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိသို့ရောက်ရှိသွားသည်၊ ၎င်းကို၎င်းကိုအလင်းနှင့်အရောင်များအဖြစ်အနက်ဖွင့်သည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွင်ဤလမ်းကြောင်းကိုအလင်းနှင့်အရိပ်သက်ရောက်မှုများကိုဖြစ်နိုင်သမျှအရှိဆုံးနည်းဖြင့်ပြန်လည်ဖန်တီးရန် algorithm ကို အသုံးပြု၍ တိကျစွာတွက်ချက်ရမည်။ photorealism နှင့်နီးကပ်စွာဖြစ်သောအလင်းနှင့်အရိပ်များကိုထပ်မံဖန်တီးရန်အတွက်အကောင်းဆုံး algorithm ကိုလက်ရှိတွင်ရှိသည် 3D ပုံရိပ်ကို rendering သည့်အခါ ray tracing အသုံးပြုသည်.
Active Ray Tracing နှင့်အတူအရိပ်များသည်အလွန်အသေးစိတ်ကျပြီးအလင်းရောင်ရှိသည့်အရာဝတ္ထုများ (မည်သည့်အလင်းရောင်တွင်မဆို) အမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည် ဂိမ်းထဲမှာအရှိဆုံးတိကျမှုနှင့်လှပသောဂရပ်ဖစ် အထူးသဖြင့်မြင့်မားသော resolution (4K UHD) ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ray tracing ၏အဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ် မည်သည့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုUltra-realistic light and shadow နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အလွန်စွမ်းအားကောင်းသော GPU (ray tracing ကိုသာရည်ညွှန်းသည့်ချစ်ပ်များတပ်ဆင်ထားနိုင်သည်)၊ ဗီဒီယိုမှတ်ဉာဏ်နေရာများစွာနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအလွန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ray tracing ကိုဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရလိမ့်မည် အနည်းဆုံး setting ကို သငျသညျမှန်ကန်တဲ့အပေးအယူရှာတွေ့မီ။
Ray tracing နဲ့အတူဗီဒီယိုကိုစီစဉ်ပါ
ဂရပ်ဖစ်၏အရည်အသွေးကိုတက်ကြွစွာရောင်ခြည်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်စိတ်ဝင်စားပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗွီဒီယိုကဒ်သည်မကြာသေးမီက (အနည်းဆုံး ၂၀၁၁ ခုနှစ်) ဖြစ်လျှင်၎င်းသည် Ray Tracing ကိုပြသနာမရှိဘဲထောက်ပံ့သင့်သည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသောဂိမ်းချိန်ညှိချက်များကိုသာစစ်ဆေးပါRTX သို့မဟုတ်အလားတူ) သို့မဟုတ်မြင့်မားသောဂရပ်ဖစ် setting ကိုအတူ activated ဖြစ်ပါတယ် High-end) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗွီဒီယိုကဒ်သည်ရောင်ခြည်စစ်ဆေးခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်မဟုတ်လော။ အောက်ပါ tabs များထဲမှတစ်ခုကိုရွေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်သည်။
Ray tracing ၏အားသာချက်ကိုရယူရန် NVIDIA ကဒ်ကိုအာရုံစိုက်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုပါသည် Gigabyte GeForce RTX 3070, အမေဇုံတွင်ယူရို ၆၀ အောက်သာရနိုင်သည်။
ဒီဗွီဒီယိုကဒ်တွင်ဒုတိယမျိုးဆက် Core RT သည်ဤနည်းပညာအမျိုးအစားအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်အတွက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအရိပ်များနှင့် photorealistic light များကိုအာမခံသော Ray tracing ကိုရည်ညွှန်းသည်။ Ray tracing အတွက်အထူးကောင်းမွန်သောအချက်များအပြင်တိုးတက်လာသောအအေးပေးစနစ်နှင့်အလိုအလျောက် overclocking system တို့ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းသည်တွက်ချက်မှုများပိုမိုတွက်ချက်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ GPU ၏ကြိမ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် AMD ဗီဒီယိုကဒ်ဖြင့် Ray tracing ၏အားသာချက်ကိုရယူလိုပါက၊ စတီဖင် NITRO + AMD Radeon RX 6800 XT OC, အမေဇုံတွင်ယူရို ၆၀ အောက်သာရနိုင်သည်။
ဒီကဒ်ဖြင့် AMD ၏အဆင့်မြင့် ray tracing အားဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့် CU cores များမှတဆင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာစျေးသက်သက်သာသာသာဖြေရှင်းနည်းများကိုလိုချင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ PC အတွက်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုကဒ်များ.
ဂိမ်းစက်များသည် Ray Tracing ကိုထောက်ခံပါသလား။
PC video cards အကြောင်းပြောနေကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို living ည့်ခန်းမီးခွက်များသို့ပြောင်းလိုက်ရင်မည်သည့် ray ray tracing နှင့်လိုက်ဖက်မလဲ? အခုအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ PS4 နှင့် Xbox One (ယခင်မျိုးဆက်ခလုတ်များ) Ray Tracing ကိုမပံ့ပိုးပါခဏတာ PS5 နှင့် Xbox Series X မှပံ့ပိုးမှုသည်ရောင်ခြည်လမ်းကြောင်း AMD ကတ်များမှထောက်ပံ့ထားသောအကောင်အထည်ဖော်မှုများမှတဆင့် (နှစ် ဦး စလုံးသည်နောက်ဆုံးပေါ် AMD ဗီဒီယိုကဒ်များတွင်ရှိသောဂရပ်ဖစ်ချစ်ပ်များ၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းကိုအသုံးပြုသည်။ )
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် garish PC gaming station ကို ၀ ယ်စရာမလိုဘဲ ray tracing မှအကျိုးခံစားလိုပါက (ယူရို ၁၂၀၀ အထက်) ရုံမျိုးဆက်သစ် gen ည့်ခန်း console နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုင်ရ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်ချိန်ညှိချက်များကိုအမြင့်ဆုံးသို့တွန်းပို့သည် (ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးရွေးချယ်မှုရှိသည့်ဂိမ်းများတွင်) ။ PS5 ခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် PS5 ကဘယ်လိုလဲ။ အသစ်က Playstation ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်လမ်းညွှန်.
Ray tracing သည်ခေတ်မီဂိမ်းဂရပ်ဖစ်များကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ HDR မွေးစားခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းထက်မက - ရှုပ်ထွေးပြီးအဆင့်မြင့်သောအလဂိုရီဇင်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဂိမ်းအားလုံးအတွက်ပေါင်းစပ်ရန်အချိန်ယူရလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနီးကပ်လာလိမ့်မည်။ စစ်မှန်တဲ့ photorealism ရန်။
ငါတို့ရဲ့ PC က Ray Tracing ကိုမထောက်ပံ့ဘူးလား။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီဒီယိုကဒ်အပြင်အရေးကြီးသောမွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပိုမိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပေးသည် သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်စက်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ mi အာဏာအရှိဆုံး PC - ဒီနေ့အကောင်းဆုံး Hardware အစိတ်အပိုင်းများ။ အကယ်၍ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် PC ဂိမ်းများကိုတီဗွီတွင်ကြည့်ရှုလိုပါက (console အစား) သင့်လေ့လာမှုကိုအသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ တီဗီမှာကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားနည်း.
တီဗီမှာဒစ္စနေး + ကိုကြည့်နည်း
ဗီဒီယိုဂိမ်းများကို Cloud Gaming di Stadia, Geforce Now, Playstation Now တို့ဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည်
ပီစီ၊ စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များမှ pixel အနုပညာဖန်တီးနည်း
Google Play နှင့် Apple Store တွင်ကဒ်တစ်ခုထည့်ရန်
Android နှင့် iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးပွင့်လင်းသောကမ္ဘာဂိမ်းများ
Android နှင့် iPhone အတွက်အကောင်းဆုံး ၀ တ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ဖက်ရှင်ဂိမ်းများ
3D စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန် MacBook တွင် eGPU ကိုမည်သို့သုံးရမည်နည်း
Android, iPhone, iPad နှင့် Windows 10 တွင်စာရင်းသွင်းမှုများကိုမည်သို့ပိတ်ရမလဲ